‘မသိဘူး ရိုမယ်’ ဆိုတဲ့ယောင်းတို့အတွက် အရိုဆုံးရုပ်ရှင်ကား (၂) ကား - For her Myanmar
‘မသိဘူး ရိုမယ်’ ဆိုတဲ့ယောင်းတို့အတွက် အရိုဆုံးရုပ်ရှင်ကား (၂) ကား
ရိုနည်းရိုရာအဖြာဖြာကိုလည်း လေ့လာလို့ရတာပေါ့ ငိငိ 😛
စာရေးဆရာ Nicholas Sparks ရဲ့စာအုပ်တွေက ဘယ်လောက်ရိုဆန်တယ်၊ ဘယ်လောက်နုရွနေတယ်ဆိုတာ ယောင်းတို့ကိုလေ စာနဲ့တောင်ပြောပြလို့မရဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ သဘာဝ၊ စိတ်အနေအထားနဲ့ နုရွလှပတဲ့အချစ်ကို ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ တကယ့်ဆရာတစ်ဆူပဲမို့ သူ့စာဖတ်တဲ့လူတိုင်း ဖြူရှင်သန့်ရှင်းတဲ့ အချစ်ကိုခံစားစေမှာပါ။ Nicholas Sparks အကြောင်းလည်း ယောင်းတို့ကို ပြောပြဖူးတယ်နော်.. မေ့သွားရင် ဒီမှာ ပြန်ကြည့်နော်.. သူ့ဝတ္ထုကို ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေလည်း များသလောက် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ နှင်းအကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကား ၂ ကားကို ဒီတစ်ခေါက် ရီဗျူးအနေနဲ့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်။
ဒီရုပ်ရှင်လေးကတော့ နှင်းတို့ရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော်မလေး Miley Cyrus နဲ့ သူ(မ)ရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ Liam Hemsworth တို့ အတူတွဲပြီး သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Ronnie (Miley) က သူ(မ) အမေရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့ သူ(မ)အဖေရှိတဲ့ ကမ်းခြေမြို့လေးဆီ ရောက်လာတဲ့အခန်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ကို စတင်ထားပါတယ်။
သူ(မ)ရဲ့ ဖခင်ကတော့ အဲဒီမြို့က လက်သမားဆရာဖြစ်ပြီး ဘုရားကျောင်းကို မီးရှို့ထားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လူအများက ဝိုင်းဖယ်ကြဉ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတော့ Ronnie ကလည်း သူ(မ)အဖေ မိသားစုကို စွန့်ခွာသွားပြီးကတည်းက ဂျစ်ကန်ကန်မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတာမို့ ဒီလိုမြို့အသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အခါမှာလည်း လူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့ ခက်ခဲနေပြီး တစ်ယောက်တည်းအနေများတယ်လေ။
ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ကျတော့ သူ(မ) လိပ်ဥကျင်းကို ဘေးနားမှာစောင့်နေတုန်း Will ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး စကားပြောရင်း ခင်မင်သွားရာကနေတစ်ဆင့် တစ်စနဲ့တစ်စ သူ(မ)ဘဝထဲကို သူကတိုးဝင်လာခဲ့တာပေါ့။
သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းက ချောမွေ့ပါ့မလား?
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဦးမှာလဲ?
ဘုရားကျောင်းကို မီးရှို့ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ သမီး ဆိုတာက Ronnie ကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေမှာလဲ?
Will ကရော ထင်သလောက် ရိုးရှင်းပါ့မလား?
စတာတွေကို ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့စရာ တွေ့မြင်ခံစားရမှာပါ ယောင်းတို့ရေ…
ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ အချောအလှအုပ်စု၊ ဆိုးပေအုပ်စု စသည်ဖြင့် အဖွဲ့လိုက်တွေ စုံနေမှ ကျောင်းသားဘဝရဲ့ အနှစ်သာရဆိုတာကို အပြည့်ခံစားရတာမလား။ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ မင်းသား ‘London’ က ဆိုးပေအုပ်စုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပါ။ သူတို့အဖွဲ့ထဲကို ဝင်ချင်တဲ့ ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ကို စနောက်ရင်းကနေ ပြဿနာဖြစ်သွားတဲ့အခါ ကျောင်းထွက်ရမယ့်အခြေအနေဆီ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း အဆက်အသွယ်ကောင်းတာကြောင့် ကျောင်းထွက်ရမယ့်အစား ကျောင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးမှာ ပါဝင်ဖို့အထိဘဲ ပြစ်ဒဏ်ကိုလျှော့ပေါ့လိုက်တာမို့ ကျောင်းကပြုလုပ်တဲ့ ကပွဲ၊ ပြဇာတ်နဲ့ တခြားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်မှု တွေမှာလည်းပါဝင်ရပါတယ်။ ကျောင်းပြဇာတ်မှာ ပြောဆိုရမယ့် ဒိုင်ယာလောခ့်တွေနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူ့ကို မင်းသမီး ‘Jamie’ က ကူညီရင်းကနေ ခင်မင်သွားပြီး တစ်ယောက်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို တစ်ယောက်ကကူဖြည့်ပေးရင်း အရမ်းချစ်ကြတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လူကီးမီးယားရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ Jamie က သူတို့ရဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းတစ်ဝက်မှာတင် ဘဝအမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး တွဲလက်ကိုဖြုတ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားလာတဲ့အခါ…
ဇာတ်သိမ်းက ယောင်းတို့မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်လာဦးမှာလား….
ဒီဇာတ်လမ်းက အသက် ၁၇၊ ၁၈ အရွယ်လူငယ်လေးတွေရဲ့ ကြားမှာဖြစ်တတ်တဲ့ အခြေအနေတွေကိုပဲ ဖော်ပြပြီးရိုက်ကူးထားတာမို့ ဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်တော့တဲ့ ယောင်းတွေအတွက်တော့ ပေါ့ကောင်းပေါ့နေနိုင်ပါတယ်။ (နှင်းတောင်ကြည့်ရတာ တစ်မျိုးလေး) ဒါပေမဲ့လည်း ရိုက်ချက်တွေက နူးညံ့လွန်းတာကြောင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ချင်ရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါလို့။
ရိုနညျးရိုရာအဖွာဖွာကိုလညျး လလေ့ာလို့ရတာပေါ့ ငိငိ 😛
စာရေးဆရာ Nicholas Sparks ရဲ့စာအုပျတှကေ ဘယျလောကျရိုဆနျတယျ၊ ဘယျလောကျနုရှနတေယျဆိုတာ ယောငျးတို့ကိုလေ စာနဲ့တောငျပွောပွလို့မရဘူး။ ဆယျကြျောသကျတှရေဲ့ သဘာဝ၊ စိတျအနအေထားနဲ့ နုရှလှပတဲ့အခဈြကို ဖျောပွတဲ့နရောမှာ တကယျ့ဆရာတဈဆူပဲမို့ သူ့စာဖတျတဲ့လူတိုငျး ဖွူရှငျသနျ့ရှငျးတဲ့ အခဈြကိုခံစားစမှောပါ။ Nicholas Sparks အကွောငျးလညျး ယောငျးတို့ကို ပွောပွဖူးတယျနျော.. မသှေ့ားရငျ ဒီမှာ ပွနျကွညျ့နျော.. သူ့ဝတ်ထုကို ပွနျရိုကျထားတဲ့ရုပျရှငျတှလေညျး မြားသလောကျ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီထဲကမှ နှငျးအကွိုကျဆုံးရုပျရှငျကား ၂ ကားကို ဒီတဈခေါကျ ရီဗြူးအနနေဲ့ တငျဆကျလိုကျပါတယျနျော။
ဒီရုပျရှငျလေးကတော့ နှငျးတို့ရဲ့ အခဈြတျော အဆိုတျောမလေး Miley Cyrus နဲ့ သူ(မ)ရဲ့ခဈြသူဖွဈတဲ့ Liam Hemsworth တို့ အတူတှဲပွီး သရုပျဆောငျထားတဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ။ Ronnie (Miley) က သူ(မ) အမရေဲ့စီစဉျမှုနဲ့ သူ(မ)အဖရှေိတဲ့ ကမျးခွမွေို့လေးဆီ ရောကျလာတဲ့အခနျးနဲ့ ရုပျရှငျကို စတငျထားပါတယျ။
သူ(မ)ရဲ့ ဖခငျကတော့ အဲဒီမွို့က လကျသမားဆရာဖွဈပွီး ဘုရားကြောငျးကို မီးရှို့ထားသူတဈယောကျအနနေဲ့ လူအမြားက ဝိုငျးဖယျကွဉျထားတဲ့ လူတဈယောကျပါ။ ပွီးတော့ Ronnie ကလညျး သူ(မ)အဖေ မိသားစုကို စှနျ့ခှာသှားပွီးကတညျးက ဂဈြကနျကနျမိနျးကလေး တဈယောကျအနနေဲ့ ကွီးပွငျးလာတာမို့ ဒီလိုမွို့အသဈကို ပွောငျးရှလေ့ာတဲ့အခါမှာလညျး လူအမြားနဲ့ပေါငျးသငျးဆကျဆံဖို့ ခကျခဲနပွေီး တဈယောကျတညျးအနမြေားတယျလေ။
ဒါပမေဲ့ တဈနကေ့တြော့ သူ(မ) လိပျဥကငျြးကို ဘေးနားမှာစောငျ့နတေုနျး Will ဆိုတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့တှပွေီ့း စကားပွောရငျး ခငျမငျသှားရာကနတေဈဆငျ့ တဈစနဲ့တဈစ သူ(မ)ဘဝထဲကို သူကတိုးဝငျလာခဲ့တာပေါ့။
သူတို့ရဲ့ ခဈြခွငျးက ခြောမှပေ့ါ့မလား?
ဘယျလို အခွအေနမြေိုးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရဦးမှာလဲ?
ဘုရားကြောငျးကို မီးရှို့ခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျရဲ့ သမီး ဆိုတာက Ronnie ကို ဘယျလို အကြိုးသကျရောကျမှုတှေ ဖွဈစမှောလဲ?
Will ကရော ထငျသလောကျ ရိုးရှငျးပါ့မလား?
စတာတှကေို ကွညျနူးဆှတျပြံ့စရာ တှမွေ့ငျခံစားရမှာပါ ယောငျးတို့ရေ…
ကြောငျးတဈကြောငျးမှာ အခြောအလှအုပျစု၊ ဆိုးပအေုပျစု စသညျဖွငျ့ အဖှဲ့လိုကျတှေ စုံနမှေ ကြောငျးသားဘဝရဲ့ အနှဈသာရဆိုတာကို အပွညျ့ခံစားရတာမလား။ ဒီရုပျရှငျထဲမှာတော့ မငျးသား ‘London’ က ဆိုးပအေုပျစုရဲ့ ခေါငျးဆောငျပါ။ သူတို့အဖှဲ့ထဲကို ဝငျခငျြတဲ့ ကြောငျးသားလေးတဈယောကျကို စနောကျရငျးကနေ ပွဿနာဖွဈသှားတဲ့အခါ ကြောငျးထှကျရမယျ့အခွအေနဆေီ ရောကျသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့လညျး အဆကျအသှယျကောငျးတာကွောငျ့ ကြောငျးထှကျရမယျ့အစား ကြောငျးရဲ့လှုပျရှားမှုအားလုံးမှာ ပါဝငျဖို့အထိဘဲ ပွဈဒဏျကိုလြှော့ပေါ့လိုကျတာမို့ ကြောငျးကပွုလုပျတဲ့ ကပှဲ၊ ပွဇာတျနဲ့ တခွားသနျ့ရှငျးရေးလုပျဆောငျမှု တှမှောလညျးပါဝငျရပါတယျ။ ကြောငျးပွဇာတျမှာ ပွောဆိုရမယျ့ ဒိုငျယာလောချ့တှနေဲ့ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့သူ့ကို မငျးသမီး ‘Jamie’ က ကူညီရငျးကနေ ခငျမငျသှားပွီး တဈယောကျရဲ့အိပျမကျတှကေို တဈယောကျကကူဖွညျ့ပေးရငျး အရမျးခဈြကွတဲ့အဆငျ့အထိ ရောကျသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လူကီးမီးယားရောဂါဝဒေနာကို ခံစားနရေတဲ့ Jamie က သူတို့ရဲ့ အခဈြခရီးလမျးတဈဝကျမှာတငျ ဘဝအမှနျကို ဖျောထုတျပွီး တှဲလကျကိုဖွုတျဖို့အတှကျ ကွိုးစားလာတဲ့အခါ…
ဇာတျသိမျးက ယောငျးတို့မြှျောလငျ့ထားသလို ဖွဈလာဦးမှာလား….
ဒီဇာတျလမျးက အသကျ ၁၇၊ ၁၈ အရှယျလူငယျလေးတှရေဲ့ ကွားမှာဖွဈတတျတဲ့ အခွအေနတှေကေိုပဲ ဖျောပွပွီးရိုကျကူးထားတာမို့ ဆယျကြျောသကျမဟုတျတော့တဲ့ ယောငျးတှအေတှကျတော့ ပေါ့ကောငျးပေါ့နနေိုငျပါတယျ။ (နှငျးတောငျကွညျ့ရတာ တဈမြိုးလေး) ဒါပမေဲ့လညျး ရိုကျခကျြတှကေ နူးညံ့လှနျးတာကွောငျ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကွညျ့ခငျြရငျတော့ အဆငျပွမှောပါလို့။
Tags: #romance, a, Last, love, Movie, Remember, Song, Teenager, the, to, Walk
Hnin Ei Oo December 12, 2018